Latest Privacy Badger dia manafoana ny fanaraha-maso Google
The Electronic Frontier Foundation (EFF) released a new version of the organization’s Privacy extension extension Izany dia natao hanatsarana ny tsiambaratelon'ny mpampiasa rehefa mampiasa ny browser-boasary izay manohana azy.
Ny dikan-teny vaovao dia manolotra fanohanana amin'ny fanesorana ny fanaraha-maso sasantsasany izay ataon'i Google amin'ny sasantsasany amin'ireo toetra amam-panahiny rehefa mandefa rohy ny rohy.
Ny EFF dia namoaka ny fanavaozana ny Badger Privacy tamin'ny volana 2018 izay nikarakara rohy manaraka amin'ny Facebook, and this new update does the same for Google’s link tracking mechanisms.
Ny fikambanana Fanamarihana fa ny famoahana voalohany dia miasa ao amin'ny Google Search, Google Hangouts, ary Google Docs afa-tsy eo amin'io tranonkala io. Na izany aza dia mahafaoka tolotra Google telo malaza amin'ny aterineto, dia tsy mandrakotra ny hafa tahaka ny Gmail na Google Plus izany.
Mampiasa fomba maromaro i Google rehefa jerena ny rohy manaraka ny fananany. Ireo fomba ireo dia tsy mitovy amin'ny vokatra ho an'ny vokatra fa miankina ihany koa amin'ny tranokala izay ampiasaina hiditra amin'ny votoaty.
Ny ping dia mampahafantatra an'i Google momba ny rohy izay nampidirin'ny mpampiasa tao amin'ny Google Search ary ahitana fampahalalana fanampiny fanampiny.
Ao amin'ny Firefox, Google dia mampiasa hetsika mousedown fa tsy manamboatra rohy. Amin'ny ankapobeny, ny asan'ny Google dia manolo ny URL maneho azy amin'ny mpampiasa raha toa ka mikambana eo amin'ny rohy iray ao amin'ny Firefox miaraka amin'ny rohy Google izay mamindra ny mpampiasa mankany amin'ilay toerana. Satria ny mpampiasa dia tarihina amin'ny rohy Google mankany amin'ny toerana ahafantaran'ny orinasa ny rohy izay nokarin'ireo mpiserasera.
Ao amin'ny Hangouts sy Google Docs, dia mampiasa fomba fiasa tahaka izany i Google mba handefa ny mpampiasa mankany amin'ny toerana voafaritra amin'ny alàlan'ny rohy Google mba ahafahany mijery ny klikan'ny mpampiasa sy ny ifantohan'ny klioketsa.
Ny Badger Privacy Privacy dia mikarakara rohy manaraka ireto karazana Google telo ireto.
Privacy Badger dia havaozina tsy tapaka miaraka amin'ireo fiarovana manaraka. Na dia lehibe aza izany, dia mila mahatsapa fa tsy hiaro tanteraka mihitsy ny fanaraha-maso an-tserasera. Raha manahy manokana anao amin'ny fanaraha-maso ny orinasa goavam-be ao anaty aterineto ianao, manandrama safidy tahaka ny Startpage na DuckDuckGo ho solon'ny Google Search.
The lahatsoratra Latest Privacy Badger dia manafoana ny fanaraha-maso Google niseho voalohany tamin'ny gHacks Technology News.
04 toe-tsaina ram "PC taona Android famerenana IP adiresy Debian Support Twitter Apps YouTube CentOS API command line paoma nbsp PPA Apache Ubuntu 14.10 Chrome Linux Mint One ' haino aman-jery sosialy Firefox Toetoetra fifamoivoizana Windows 8 loharano misokatra WordPress Apple Watch Performance bilaogy endri-javatra Users Time Unix HTTP PDG MySQL HTTPS lalao Ubuntu 16 Linux Ubuntu Systems vaovao farany Ubuntu 14.04 fanamarinana iPhone HTML Plugin 'App fikarohana windows update Plugins web server Malagasy Bible Database Samsung OS X finday avo lenta Server Windows 10 Rafitra fikirakirana Microsoft Windows lalao Unité centrale raki-daza Linux GNOME SSD afa-po Windows Phone rindrambaiko tahirin-kevitra hametraka Up " Windows CentOS 7 rafitra Fitaovana finday Command Microsoft Facebook takelaka fikirakirana MAMAKA Company Samsung Galaxy SEO Phone SSH USB Video famotsorana ubuntu 15.04 File Google Cortana fitaovana fitaovana app store fitaovana finday Ubuntu 10 Nginx bilaogy web browser Screen fitaovana PHP Bing